नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा ८० बढी स्थानमा जित्छ, प्रदेशमा बुहमत ल्याउछ
फरमुल्लाह मन्सुर नेपाली कांग्रेसका साद्गी नेताका रुपमा परिचित छन् । कांग्रेस भित्रकै मधेसी नेतामा शक्तिशाली मानिएका मन्सुरले बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर–३ बाट केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मन्सुरसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, चुनावी परिणामलगायतका बारेमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
चुनावी प्रचार अभियान कुन ढंगले अघि बढिरहेको छ ?
चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेदेखि नै मैले जनतासँग मुख्य दुई कुरा राख्दै आएको छु । २०७० सालको निर्वाचनमा मलाई निर्वाचित गरेर पठाउँदै गर्दा वारा जिल्लाका जनताले दुई ओटा जिम्मेवारी दिएका थिए । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने । अनि दोस्रो विकासको प्रक्रियालाई अघि बढाउने । संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाबाट सुरु भएपछि म सक्रिय भएर अग्रपङ्क्तिमा रहेर मुख्य गरेर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पछि परेका वर्गहरु मुस्लिम, थारु, दलित, आदिवासी, मधेसीलगायतको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने कुराको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएँ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यका हरेक तहमा लागु गर्नूपर्छ भन्ने पक्षमा पनि मैले आवाज उठाउँदै आए ।
यो संविधानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी गर्ने कुरामा पनि मैले सक्रिय भूमिका खलेँ । यो कुरा यहाँका जनताले थाहा पाएका छन् । त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारीसहित योपटक पनि विजयी गराउने छन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।
तपाईलाई यो क्षेत्रका जनताले फेरि किन विजयी बनाएर पठाउने ?
म अहिले बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर–३ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संघको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेको छु । मैले निकै लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएको यो क्षेत्रका जनताले यो पटक पनि मलाई विजयी गराएर पठाउनु हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । म सासंद् हुँदा मात्र होइन अहिले मन्त्री भैरहेका बेला पनि यो क्षेत्र र समग्र जिल्लामै सडक, खानेपानी, विजुली, अस्पताल निर्माण गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिदलगायत निर्माण गर्ने जस्ता विकासका काममा योगदान गर्दै आएको छु । यो विकासको कामलाई बारा क्षेत्र नम्बर–३ का जनताले राम्ररी बुझेका छन् । म अहिले चुनावी अभियानका क्रममा जुन–जुन ठाउँमा गएको छु । ती–ती ठाउँका जनताले देखाएको उत्साहले पनि मलाई यो क्षेत्रका जनताले विजयी गराएर पठाउँछन् भन्ने विश्वास लिएको छु । म आफैँले त भन्ने कुरा होइन । तर, पनि मलाई यहाँका जनताले जुन ढंगले विकासप्रेमि नेताका रुपमा चिनेका छन् । त्यसमा मलाई खुशी लागेको छ । यहाँको विकास र संविधान निर्माणका क्रममा मैले खेलेको भूमिकाका कारण पनि यहाँका जनताले मलाई भोट हालेर विजयी गराउँने निश्चित भएको छ ।
संविधान जारी गरेपछि तराई–मधेसका जनता असन्तुष्ट भनेका थिए । अहिले उनीहरु सन्तुष्ट छन् ?
संविधान जारी गर्दा तराई–मधेसका मात्र होइन आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका जनता पनि असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसैबेला मैले संविधान कुनै गिता वा कुरान होइन भन्दै संविधानमा भएका त्रुटिलाई संविधान संशोधन मार्फत सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भनेर मैले आम समूदायले स्वीकार गर्न सकिने संविधान बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा पनि भूमिका खेलेँ । त्यसले हिमाल, पहाड, तराई, हिन्दु, वौद्ध, इसाई, मुस्लिमबीच जातीय सद्भाव कायम गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । जातीय सद्भाव कायम गर्न मैले खेलेको भूमिकालाई पनि यहाँका जनताले राम्ररी बुझेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु । मैले गरेका राजनीतिक पहल, मैले खेलेको भूमिका र मेरो सक्रियतालाई हेरेर बारा क्षेत्र नम्बर–३ का सबै जाति, धर्म, समूदाय र विभिन्न विचार बोकेका जनताले पनि सूर्य चिन्हमा भोट हालेर मलाई विजयी गराउँने अपेक्षा गरेको छु ।
नेपालमा अहिले वाम गठबन्धनको माहोल बनेको छ । यो माहोलले तपाईँलाई बारा क्षेत्र नम्बर–३ बाट निर्वाचन जित्न असहज छ भन्ने पनि आँकलन गरिएको छ नि ?
सबै भन्दा पहिला त यो भन्ने गरिएको बाम गठबन्धनले मेरो उम्मेदवारीलाई टक्कर दिने कुनै पनि सम्भावना देखिदैँन । अहिले बाम गठबन्धन भनेर हल्ला गरिएको छ । यो बाम गठबन्धन नै होइन । यो त कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन हो । एमाले र माओवादी अलग–अलग निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेससँग चुनाव जित्ने कुनै पनि सम्भावना नभएपछि यो कम्युनिष्ट गठबन्धन जन्मिएको हो ।
उनीहरुले गठबन्धन बनाएपछि हामी कम्युनिष्टहरु मिलेर चुनाव लड्ने, दुई–तिहाई स्थानमा जितेर सरकार बनाउने र संविधान पनि संशोधन गर्ने र कम्युनिष्ट व्यवस्था लागु गर्ने भनिरहेका छन् । उनीहरुको यो भनाईले पनि ७० वर्षको लामो लडाईँपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गठतन्त्र धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
त्यति मात्र होइन लोकतन्त्रको गला निमोठ्ने कार्यमा कम्युनिष्ट शक्ति लागेका छन् । यो देशका लागि पनि दुर्भाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।
त्यसैले लोकतन्त्रको लडाईँमा निकै ठूलो योगदान गरेका नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य कुनै पनि दल रोज्लान भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हातमा आएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाईँमा पाँच पटक जेल र दर्जनौँ पटक प्रहरीको लाठी खाएको म जस्तो व्यक्ति लोकतन्त्रका पक्षमा लडिरहने छु । म जस्ता हजारौँ व्यक्ति यसैको पक्षमा रहेका कारण पनि आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित जित्ने निश्चित छ ।
बाम गठबन्धनको दीर्घकालिन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
स्थानपना कालदेखि नै टुटफुटमा रमाउने कम्युनिष्टहरु बीच एकता होला भन्ने मैले अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेको छैन । ०२८ सालमा ‘नक्शलवादी’ आन्दोलनबाट प्रभावित भएको तत्कालीन नेकपा मालेले ०४६ सालमा आएर त्यो विचार गलत रहेछ भन्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्यो । पछि फेरि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसाथ गर्यो । पछि फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्यो । अहिले फेरि ती कम्युनिष्टहरु नै संविधान संशोधन गरेर कम्युनिष्ट व्यवस्था लागु गर्छौ र नेपालमा साम्यवाद ल्याउँछौँ भनिरहेका छन् । यो नै कम्युनिष्टहरुको सबै भन्दा ठूलो विचलन हो । त्यति मात्र होइन ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्ति हुन्छ’ भन्दै १० वर्ष हतियारसहित युद्ध लडेको माओवादी पछि संसदीय व्यवस्थाबाटै सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । अहिले त्यही दलसँग एमालेले वाम तालमेल गर्ने भनिरहेको छ । त्यसैले पनि यो तालमेल दीर्घकालिन हुँदैन भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ । उनीहरुले अहिले पनि कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादको कुरा गरिरहेका छन् । यो नेपालका माटोमा उचित छैन । नेपाली कांग्रेसले जनतालाई नै मालिक बनाउने सिद्धान्तलाई बोकेर हिडेको छ । म आफैँ पनि यही विचार बोकेर ४८ वर्षदेखि निरन्तर राजनीति गरिरहेको छु । यी सबै कारणले मेरो क्षेत्रमा मात्र होइन मुलुकभरी नै नेपाली कांग्रेसको माहोल आएको छ भनेर गौरवका साथ भन्न सकिन्छ ।
संविधान जारी गर्ने क्रममा देखिएका असन्तुष्टिलाई कम गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी भूमिका खेलेको छ । यसको मुल्याङ्कन पनि यहाँका जनताले गरेका छन् । त्यसैले मधेसी जनताको राष्ट्रियामाथि प्रश्न उठाउने, जातीय विभाजन ल्याउने एमाले–माओवादी होइन जातीय सद्भाव कायम गरेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसलाई छान्नेछन् भन्नेमा म ढुक्क छु । यहाँका जनताले मधेसीलाई अपमान गर्ने, गाली गर्नेहरुलाई निश्चय पनि यो निर्वाचनमा विजयी गराउने छैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर–२ का जनताले जसरी नेपाली कांग्रेसलाई शानदार विजयी गराए यो निर्वाचनमा पनि त्यसैगरी विजयी बनाउनेछन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।
नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि चार जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए । तर, उनीहरुले संविधान जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अलिकती पनि पहल गर्न सकेनन् । मधेसका ५८ जना मन्त्री हुँदा पनि संविधान जारी भएन । संविधान जारी गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने दुबै चरणमा नेपाली कांग्रेकै आवश्यक भयो । यो हुनु भनेको यो देशमा जनताले कांग्रेसलाई बढी रुचाएका छन् भन्ने संकेत पनि हो । नेपाली कांग्रेस जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश पनि हो । त्यसैले बारा जिल्लामा पनि यो कम्युनिष्ट गठबन्धनको कुनै अर्थ रहने छैन । कांग्रेस शानदार विजयी हुनेछ । मैले अघि पनि भने अहिले पनि यी कम्युनिष्टहरुले कथित समाजवादको नारा दिएर जनतालाई भुलाउन खोजेका छन् । तर, यो सम्भव छैन । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि पनि नेपाली कांग्रेस नै विजयी हुनुपर्छ । देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ ।
कांग्रेले बाम गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा देशमा उत्तर कोरियाली शासन लागू हुन्छ भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । यो सत्य हो ?
यो कांग्रेसले लगाएको आरोप होइन । कम्युनिष्ट गठबन्धनकै नेताहरुले भनेका अभिव्यक्ति हुन् । उनीहरु आफैँले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने र समाजवादी व्यवस्था लागु गर्छौ भनिरहेका छन् । त्यसैले यो हामीले लगाएको आरोप होइन । उनीहरुले भनेको अभिव्यक्ति हो । उनीहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई खारेजी गरेर एकदलीय व्यवस्थाको हौवा पिटिरहेका छन् । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।
कांग्रेसले सात वटै प्रदेशमा सम्मानजनक सरकार बनाउने र संघमा पनि बहुमत ल्याउने सम्भावना कत्तिको छ ?
नेपाली कांग्रेले केन्द्रमा ८० बढी स्थानमा जित्छ र प्रदेशमा पनि शानदार साथ बहुमत प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियत राख्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको लडाईँको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाली विजयी गराउन म सबैसँग आग्रह गर्छु ।